Semalt: Ngaba i-Google Analytics Spam iyingozi?
Ugaxekile kwi-akhawunti ye-Google Analytics yingxaki ehlala rhoqo kwiifom ezimbini ezahlukeneyo. U-Ivan Konovalov, u-10 (Semalt oyingcali, uchaza ukuba ukuthunyelwa kwe-bot spam kukuqokelelwa kwe-real bots ezotyelela iwebhusayithi yakho okanye iblogi. Umoya wokudlulisa ugaxekile uqokelelo lwebhodi olugqithisa iwebhsayithi kwaye litshintshe amaseva e-Google Analytics ngokuthe ngqo. Abayikuvakashela iwebhusayithi yakho, kwaye bakhohlisa i-Google Analytics ukubala ukujonga kwephepha kunye neeseshoni. Ngenxa yoko, iindidi zibini zihluke komnye. Nangona kunjalo, bobabini babangayonakalisa idatha yakho ye-analytics kwinqanaba.
Bangalimaza njani iiwebhusayithi zethu okanye amablogi?
Injongo yabagxeki kunye nabahlaseli kukukukhawulela kwiikhonkco zabo ezihambelanayo, ukuvelisa amaninzi kwimali kwiintengiso zabo..Banikezela ngeenkonzo ezinobungakanani okanye baya kukunyanzela ukuba uqukumbele kumaphepha asolisayo okanye asulelayo. Kungcono ukuba ungabikho kwiiwebhsayithi ze-spammer okanye iiblogs ukuba ufuna ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho kunye nokukhusela.
Akukho ziphumo ezibi ngqo kwiwebhusayithi yakho, ngaphandle kwexabiso elincinci elifumanayo yonke imihla. Kwakhona, i-bots iyangena kumaseva, kwaye izicwangciso ze-SEO akunakukunceda uzibambe ngokusisigxina. Abagaxekile kunye nabahlaseli bafuna into engakumbi kunokuba babeke iiwebhusayithi zabo kwiziphumo zejinjini zokukhangela kwaye baphakamise iphepha lakho lewebhu emva kokhuphiswano. Ngaloo ndlela, abanalo nantoni na indawo kwi-site yakho okanye ngaphandle kokuba bathathe isigqibo sokweba ulwazi lwakho lomntu.
Ngaba iyona ndlela yendlela?
Ukuba nje kucace, i-Google Analytics spam yokudlulisa ingeyona yendlela. Abazange bavakashele iwebhusayithi yakho kwaye bathumele izicelo ezifake kwiingxelo zakho ze-analytics ngokusebenzisa i-bots ethile. Baza kubonisa uluhlu lweeSayithi zokuBhekisela xa uhlola ukufumana> Zonke i-Traffic> Indawo yokudluliselwa kuyo. Bandisa izinga lokuhlawula isayithi kwaye banciphise izinga lokuguqulwa kwalo. Abakwa-Spammers kunye nabahlaseli bavelisa nayiphi na i-ID ye-UA-XXXXY-Z ye-ID kunye nokuthumela ii-hits okanye izicelo zokutshabalalisa ishishini lakho kwi-intanethi.
Ungaqala ngokubalulekayo: yiya kwiZimiselo kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye nqakraza kwi "Hlukanisa zonke izinto ezikhethiweyo ezinqumeni ezixhamayo kunye ne-bots". Le yindlela ebaluleke kakhulu kunazo zonke ezithandwa nguGoogle, kwaye ungasebenzisa le ndlela ukulungisa ingxaki ngemizuzwana. Ngaphandle koko, unokwenza izihlungi uze ukhuphe ngaphandle kwabathumeli okanye uhlele ifayile yakho .htaccess kwaye ulondoloze isetingi phambi kokuvala ifestile Source .